Izitshalo | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Ukuhlwanyela nokuThuthukisa Amathiphu we-Millet
Kuye wonke umuntu uyazi ukuthi yini i-millet. I-Millet iyisitshalo saminyaka yonke samasaka somndeni wezolimo. Amasiko aneziqu ezinama-cuff enomumo omkhulu wenombolo ye-nick branching kusuka empandeni. I-inflorescence i-paniculata, i-spikelet ngayinye inezimbali ezimbili - abesilisa nabesilisa nabesifazane. Indlebe yesitshalo i-convex ohlangothini olulodwa, ihlelwe kwesinye.
Amathiphu okutshala nokukhula okusanhlamvu
Ummbila wezinhlamvu ungenye yezinqolowa zasendulo kakhulu, ifolishi kanye nezitshalo zokudla, okuyinto eyaziwa ngokuyinhloko njengesidlo sokudla esincane. Nokho, maduzane, lolu tshani seluthole ukuthandwa kakhulu phakathi kwabasekeli bokudla okunomsoco kanye nezondlo zokudla, okugqugquzela ukuthi amabele afakwe ekudleni kulabo ababuka isisindo sabo.
Ukusebenzisa i-rye njenge-siderata
Ngokwandisa, kumasayithi ethu rye ahlala njengengxenye ye-siderat. Izitshalo ze-Sideral ziwumthombo omuhle kakhulu womanyolo ophilayo kanye nenye indlela yomquba. Amasiko ahlukene angenza njengama-siderats, kodwa i-rye yiyona ethandwa kakhulu. I-Rye njenge-siderat: izici ze-Rye yi-herb yaminyaka yonke yomndeni wezitshalo.
Izici ze-rye ekhulayo, ukutshala nokunakekelwa
Uma wenze isinqumo sokutshala umhlaba nge rye, awuzange uphazamiseke. Это беспроигрышный вариант хотя бы потому, что в агрономии культура широко используется в качестве зеленого удобрения и санитара грунта. Собранному урожаю тоже найдется применение - существует множество кулинарных и медицинских рецептов, главным ингредиентом в которых выступают зерна, отруби и даже стебли ржи.
Imfihlakalo yokukhula kwe-fescue kusuka kumbewu
I-Fescue iyinhlobo yezitshalo ezinomsoco ezivela emndenini wezitshalo. Ifinyelela ku-1.2 kuya ku-2 m ukuphakama. U-Ovsyanitsya mhlawumbe uyisitshalo esithandwa kakhulu kunotshani nokukhiqiza kwezwe. Ukukhetha indawo ye-fescue. Izindawo ezishisayo, ezomile nezomhlaba, zizohambisana nomkhosi. Lokhu kungakhanyiswa yizinhlangothi eziseningizimu zama-rockeries noma amadiza ensimbi, ngoba ngisho nokushisa okuphezulu akuyona ingozi kulesi sitshalo.
I-Triticale: incazelo kanye nokulima kwe-hybrid ye rye kanye nokolosi
Lesi sihloko sichaze izinto ezihloswe ukukujwayela ngesitshalo esiyingqayizivele, esithatha igama elithakazelisayo nelingavamile - "triticale." Luhlobo luni lwesitshalo, kungani i-triticale itshalwe futhi yikuphi ubuchwepheshe bokulima kwayo, funda ngezansi. I-Triticale - ukuthi yi-Triticale - ngumkhiqizo wesandla sabantu.
Iyini ibhali eliwusizo
Kusukela ebuntwaneni, sizwa ngokudla okunempilo nokuphilile, okuyinhloko okumele kube yizilimo njengomthombo wama-carbohydrates abalulekile. Enye yezinto eziwusizo kakhulu futhi okunomsoco yi-porridge ye-barley. umlimaze
Izinhlobonhlobo ezinhle zommbila wokwenza i-popcorn
Ngokuvamile, ukuya esikhungweni se-cinema noma sezokuzijabulisa, sithenga ibhakede lonke le-popcorn. Ngakho okumnandi, futhi ifilimu (noma ikhombisa) ibonakala iyathakazelisa. Lo mkhiqizo onomusa, oqukethe amakholori ambalwa, ungapheka ekhaya. Izinhlobo ezingcono kakhulu Wonke umuntu uyazi ukuthi i-popcorn yenziwe ngani. Kusuka kummbila. Kodwa akubona wonke umuntu owazi ukuthi akuzona zonke izinhlobo ezifanele ukulungiselela.
Yini elimaza isikhuhlane esilimazayo nendlela yokulwa nayo?
I-Bug inambuzane eyingozi ayihlali ezindlini noma ezindlini zezwe, inonakalisa izitshalo emasimini nasezinqolobaneni, lapho okugcina kungagcinwa khona. Ukukhuphula okusanhlamvu, kungenzeka ukuthi uqaphele ukuthi izici zekhwalithi zashintshashintsha. Amathonya ahlukahlukene angalimaza isiko, kodwa ikakhulukazi igciwane elingabangela ukulimala okukhulu, okuzoxoxwa kamuva kulesi sihloko.
I-Herbicide "Granstar": indlela kanye nesikhathi sokusebenza, ukusetshenziswa
Sekuyisikhathi eside ukutholakala kwezidakamizwa kutholakala ukuthi kuyindlela ephumelelayo futhi ephumelelayo yokulawula ukhula ensimini noma engadini yemifino. Futhi nakuba kukhona okungafani, akekho umgadi wensimu ongakwenza ngaphandle kwale "imithi". "I-Granstar" ingenye ye-herbicide ethandwa kakhulu. Isithako esisebenzayo kanye nefomu lokulungiselela Isenzo salo senziwa yizinto ezikhethekile - i-tribenuron-methyl engama-750 g / kg.
I-Herbicide "Helios": isilinganiso, imfundo
Abalimi abaningi babhekana nenkinga yokukhula kokhula njalo. Esimweni esinjalo, kubalulekile ukutholwa ngokuphuthumayo isidakamizwa esizosiza ukulwa nokhula. Sikuqaphele lesi sihloko, esizobe sinikezwe imiyalelo ekusetshenzisweni kwe-Helios "yokubulala". Isithako esisebenzayo, ifomu lokukhululwa, ukupakisha Ingxenye eyinhloko ekubunjweni kwe-herbicide yi-glyphosate, engamakhemikhali e-phosphorus-organic.
Mogar Chumiza (bristle): ukunakekela isitshalo kanye nezakhiwo ezizuzisayo zokutshala utshani
Bristles, Mogar Chumiza, amagundane, setaria - wonke lawa magama abhekisela esitshalweni esisodwa i-Setaria italica, esitholakala ezindaweni ezise-steppe nasehlathini. It has properties ewusizo, esetshenziswa kwezolimo, design landscape kanye nemithi yendabuko. Sifunda okwengeziwe mayelana nokwakhiwa kwamakhemikhali, izakhiwo eziwusizo nezindlela zokukhula kwezibhamu.
Izinhlobo ezihlukahlukene zommbila
I-sweetcorn ijwayele wonke umuntu kusukela ebuntwaneni. Izinhlamvu zegolide zine ukunambitheka okuyingqayizivele, futhi akusikho isitshalo esisodwa esingahle siphume kancane kancane ukunambitheka komkhumbi wokhula. Namuhla, lesi sitshalo sinesinye sezizinda ezihola phakathi kwezitshalo zezolimo ngenxa yokungathobeki kokulima nokusetshenziswa kwayo okuhlukahlukene.
Indlela yokutshala izitshalo: amazinga wesicelo
Amanzi, ukushisa, ukukhanya kanye nezondlo kuyadingeka ekuthuthukiseni okuhle okusanhlamvu kwezitshalo kanye nokuthola isivuno esihle. Okubaluleke kakhulu kulezi zinto emva kwe-oxygen, i-carbon ne-hydrogen yizimbiwa - nitrogen (N), i-phosphorus (P) ne-potassium (K). Nakuba bekhona ekubunjweni kwenhlabathi, inani laso alanele, okuholela ekudingeni izimila zamakhemikhali.
Izici zentwasahlobo ka-spring, ukulima, isivuno
Ukolweni ungenye yezitshalo ezinkulu zokudla emhlabeni. Lolu utshani luye lwahlonywa kusukela ezikhathini zasendulo futhi manje selusakazwa cishe kuwo wonke umhlaba. Lezi zinto zixoxa ngezinto eziphilayo zokukolweni kakolweni, kanye nezici zokulima. Incazelo Lesi sivuno singomndeni wezinhlamvu kanye nohlobo lweBolweni.
I-lactic acid yezinogwaja: umthamo, imiyalelo yokusetshenziswa
Kungani izinkukhu zinamaphiko
Inhlama yamaMoor: inzuzo nokuqhafaza
Ungayisakaza kanjani i-azalea ekhaya
I-Primrose transplant: ekhaya nezindlela zokuzala
Ukusika: ukubekwa kwezikhathi, imithetho, ukusika ukuphakama, amathuluzi
I-Levzey (impande ye-maral): ukusetshenziswa kwezakhiwo zokwelapha nezenzuzo
I-honeysuckle edliwayo: izinhlobo nezinhlobonhlobo, izici zokutshala nokunakekela ezifundeni ezahlukahlukene, ukwelashwa kwezifo nezinambuzane, izibuyekezo